काठमाडौँका यादवले जिते बन्दीपुर दौडको उपाधि |
काठमाडौँका यादवले जिते बन्दीपुर दौडको उपाधि
Thursday, January 16, 2020 । तनहुँ
तस्बिर : सानेबहादुर नेपाली / रासस
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको दौड प्रतियोगिताको उपाधि काठमाडौँका अजितकुमार यादवले जितेको छ । बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा खुलातर्फको उपाधि यादवले जितेको हो ।
बन्दीपुरको डुम्रेबजारदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्मको आठ किमी दूरी ३८ मिनेट ५३ सेकेण्डमा पार गर्दै यादवले उपाधि जितेको हो । प्रतियोगितामा ओखलढुंगाका अनिल कार्की द्वितीय भएको छ । उनले उक्त दूरी ३९ मिनेट १६ सेकेण्डमा पूरा गरे । प्रतियोगितामा प्रथम र द्वितीय हुने धावकले क्रमशः ३० हजार र १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
आन्तरिकतर्फको दौडमा बन्दीपुर–१ निवासी चन्द्रकुमार सुनार प्रथम र वडा नं २ निवासी रविन गुरुङ द्वितीय भए । उनीहरुले क्रमशः उक्त दूरी ४४ मिनेट ५१ सेकेण्ड र ४६ मिनेट ३७ सेकेण्डमा पूरा गरे । प्रतियोगितामा खुल्ला र आन्तरिक गरी ३० धावकको सहभागिता रहेको थियो । विजेताहरुलाई गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल र गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले पुरस्कार वितरण गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री लम्सालले खेलकुदका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । पर्यटनबाट समृद्धि सम्भव रहेको चर्चा गर्दै उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसर पारेर बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित दौड आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले सोही अवसरमा एकल पुरुषलाई सिरकसमेत वितरण गरेको छ । गतवर्ष एकल महिलालाई सिरक वितरण गरेको गाउँपालिकाले यो पटक ७० वर्ष उमेर कटेका ६०० एकल पुरुषलाई सिरक वितरण गरेको हो । बन्दीपुरलाई पर्यटनका माध्यमबाट परिचित गराउन गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले गतवर्ष वडा नं ४ विमलनगरस्थित सिद्धगुफाभित्र टेवलटेनिस प्रतियोगिता र कविता वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको थियो ।
सताक्षी गोल्डकपको उपाधि मच्छिन्द्रको पोल्टामा
खप्तड गोल्डकप फुटबल: एपिएफ क्वाटरफाइनलमा
अन्तरजिल्ला क्रिकेटको उपाधि नवलपुरलाई
चौबिसे रनिङकप : फाइनलमा वडा नं. ७ मौनाबुधुक
दिदीबहिनी कप महिला भलिबलको फाइनल स्थगित
१. अन्नपूर्ण आधार शिविरमा चहलपहल बढ्दै
२. नागढुंगाबाट खैरो हेरोइनसहित युवती पक्राउ
३. शेर्पा समुदाय ग्याल्पो ल्होसार मनाइँदै
४. सिन्धुपाल्चोकमा हराएको मूर्ति फेला
५. रोशीका उपाध्यक्षको न्यायिक काम, आफ्नो सुविधाले दुई एम्बुलेन्स खरिद
६. बी डिभिजन लिग : ब्वाइज युनियनद्वारा कुमारी पराजित